ပင်မစာမျက်နှာ ထိတ်လန့်ဖျော်ဖြေရေးသတင်း 'Black Mirror' သည်ဇွန်လ ၅ ရက် Netflix တွင်ထုတ်လွှင့်ရန် Ep Season သုံးခုကိုသတ်မှတ်ပေးသည်
'Black Mirror' သည်ဇွန်လ ၅ ရက် Netflix တွင်ထုတ်လွှင့်ရန် Ep Season သုံးခုကိုသတ်မှတ်ပေးသည်
by တိမောသေရောလ် မေလ 17, 2019
ကရေးသား တိမောသေရောလ် မေလ 17, 2019
Black ကကြေးမုံ is coming back for အခြားရာသီ, and like its second series, will contain only three episodes.
The anthology has been praised for its ability to beasurrogate for ဆည်းဆာဇုန် in the electronic age. Tackling subjects such as social media influence and robot tech, Black ကကြေးမုံ has its pulse on horrors ofapower button obsessed society.
Season five is not straying from its signature framework. အမျိုးမျိုး ကပြောပါတယ် these episodes will “dive deeper into the state of artificial intelligence, smart technology and virtual reality.”
For those who don’t know Black ကကြေးမုံ taps into what can happen if technology began to control humans either by influence or self-awareness. These cautionary tales are realistically sewn into the fringe of science fiction and probability.
Black ကကြေးမုံNetflix နဲ့
'John Wick: အခန်း ၃ - Parabellum' လှုပ်ရှားမှုမြင့်သို့တက်ခြင်းနှင့်မျက်ရည်များ
ဘရုစ်ကမ့်ဘဲလ်သည်“ လုံးလုံးစွဲမြဲနေသော” 'Evil Dead' ဗီဒီယိုဂိမ်းကိုတီးခတ်သည်